पोखराको लखन चोकमा ब्यवसायी र प्रहरी विच झडप | ebaglung.com
२०७४ श्रावण १२, बिहीबार ११:३८	Top News, थप समाचार 424 पटक हेरिएको !
कविता घर्तीमगर, पोखरा, २०७४ साउन १२ । पोखरा स्थित लखनचोमा सडक फुथपाटमा ब्यवसायी गर्दै आएका ब्यवसायी र प्रहरी विच आज विहान झडप भएको छ । लखनचोक क्षेत्रको सडक फुटपाथ अतिक्रमण रोक्नका लागी प्रहरी, नगरपालिकाका कर्मचारी तथा सशस्त्र प्रहरीको टोलीले हटाउन खोज्दा झडप भएको हो । झडप हुदा नगरपालिकाका कर्मचारी पुरुषोत्तम थापा घाईते भएका छन भने ब्यवसायी तर्फ चार जना सामान्य घाईते भएका बताईएको छ । घाईते थापाको गण्डकी मेडिकल क्लेजमा उपचार भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पोखराको लखनचोकस्थित नेपाल वायु सेवा निगमको स्वामित्वमा रहेको ‘सस्तो बजार’ प्रकरणसँगै त्यहाँ रहेका व्यवसायीहरुले बिगत केही दिनदेखि सडक पेटीमा नै व्यवसाय गरिरहेका छन । आफ्नो दैनिकी गुजारा त्यहि ब्यवसायबाट चलाउदै आएका ब्यवसायीले सस्तो बजार भित्र रहेको करिव चार लाख बरावरको सामान नष्ट भएको दाबी गरेका छन । विषेश गरि तरकारी फलफुल लगाएतका खाद्यान्न नष्ट भएको जनाइएको छ ।
लामो समयसम्मको प्रकरण सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न ब्यवसायीहरुले भने सस्तो बजार सम्बन्धित ब्यक्ति र संघसंस्थाहरुलाईै बुधबार बार्तामा आउन अब्हान गरेका थिए । लखनचोक स्थित सस्तो बजार सूर्य्दिल ईन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई मासिक ११ लाख नेपाल वायु सेवा निगमलाई बुझाउने गरी टेन्डर परेको थियो । व्यवसायीहरु टेन्डर प्रक्रियामा जान नमानेपछी असार १८ गते देखि सस्तो बजार बन्द रहेको छ ।
काम भन्दा छिटो पैसा सक्ने होडवाजीले गुल्मीका सडकहरुको यस्तो भयो हबिगति !
२०७५ कार्तिक १०, शनिबार १६:००
२०७५ आश्विन २६, शुक्रबार ०७:०२